Ifulethi Lezivakashi Lezwe Elithulile Elithulile
Nethezeka futhi ujabulele uhambo lwakho oluseningizimu-ntshonalanga ye-NM kusukela ekubalekeni kwethu okuyingqayizivele nokuphumula. I-lounge emphemeni. Shayela imizuzu emihlanu ukuya ku-Dragonfly trailhead. Ukushayela okufushane kwemizuzu eyishumi ukuya e-Ft Bayard naseBig Tree Trailhead. Ukubukwa kwezilwane zasendle eziningi lapha okuhlanganisa izinyamazane, onogwaja, izinyoka, ama-elk, oklebe, impilo yezinyoni ezinkulu, ama-peccaries, onogwaja ojaha, nezimpungushe. Amahora amabili ukuya e-Gila Cliff Dwellings. Ukushayela imizuzu emihlanu kuya kweyisikhombisa ukuya enkabeni yedolobha i-Historic Silver City. Boston Hill izindlela zokuhamba izintaba. I-Gomez Peak. Izitolo zekhofi. Kuningi ongakubala.
Izivakashi zingathokozela I-Apartment, idekhi, indawo ezungeze ifulethi, futhi zingahamba zizungeze indawo ukuze ziphumule futhi nomoya omusha. Thumela umbhalo Kimi futhi ngizokutshela ukuthi uhambe kuphi.
Siphuma kumgwaqo owubhuqu cishe amamayela amathathu empumalanga yomngcele osempumalanga weSilver City. Lokho kusibeka eduze neSilver City yomlando, izindawo zokudlela, iSilco Theatre, idolobha elinomlando, izitolo ezithengisa izinto ezithengiswayo, izinto zakudala, izitolo zekhofi. Ngokuhamba ngezinyawo nokuhamba ngebhayisikili ezintabeni hlola indawo ye-Dragonfly Trail. Ujekamanzi uyimizuzu emihlanu (noma ngaphansi), ukushayela usuka endaweni yethu. Shayela i-Hwy 180 empumalanga, cishe imizuzu eyi-10 noma ngaphansi idumile i-Ft Bayard kanye ne-Big Tree Trails. Enkabeni yedolobha iSilver kune-Boston Hill trail system. Enye indawo enhle yokuhamba ngezinyawo eSilver yiGomez Peak.
Sisezweni kodwa siseduze nezinsiza zasemadolobheni. Sinezitolo ezinkulu ze-Walmart Super Store, Albertsons, & Food Basket. Isibhedlela Sesifunda sase-Gila siseduze kanye nemitholampilo eminingi yezokwelapha. Amakhemisi ahlanganisa i-Walgreens ne-CVS.
Kunendawo yokuthengisa imithi e-Albertsons Shopping Centre eduze kwesitolo se-UPS kanye nendawo ye-pizza kaKhesari.
Lokhu kulele kubavakashi. Ngitholakalela imibuzo noma ingxoxo. Ukusebenzisana kuningi noma kuncane okuthandwa yizivakashi. Zihlole futhi uphume.